Ybọchị mmiri mmiri ozuzo - IntoKildare
Bọchị mmiri ozuzo
Ugboro ụbọchị mmiri mmiri na ezumike pụtara ibi n'ụlọ na enweghị ọtụtụ ihe ị ga-eme. Ọ dabara na anyị na-enwe ụbọchị mmiri ozuzo ma ọ bụ abụọ na Ireland ma ị ga-ahụ ọtụtụ ihe omume ime ụlọ na ebe nkiri maka ụmụaka na ndị okenye.
Enweghị ebe dịka Kildare, mgbe anwụ na-awa. Site na ụzọ ụkwụ dị egwu, ọmarịcha ọwa mmiri na ihe ochie ochie nke Ireland Ancient East, Thoroughbred County dị oke mma! Mana ka anyị chee ya ihu, anyị na-enweta oke oke ụbọchị ụbọchị mmiri ozuzo, ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-akwụ ụgwọ maka inye olulu mmiri n'ụbọchị mmiri. Kama ikwe ka ajọ ọnọdụ ihu mmụọ anyị dajụọ, taa na Into Kildare, anyị achịkọtara ihe kacha mma anyị ga-eme na Kildare mgbe mmiri zoo!